DAAWO: Sida ay wax u dheceen min biloow ilaa dhamaad & cilladda laga yaabo inay sababsatay dayuuraddii dhacday! (Faahfaahin) | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka DAAWO: Sida ay wax u dheceen min biloow ilaa dhamaad & cilladda...
DAAWO: Sida ay wax u dheceen min biloow ilaa dhamaad & cilladda laga yaabo inay sababsatay dayuuraddii dhacday! (Faahfaahin)
(Hadalsame) 12 Maarso 2019 – Waxaa soo baxaya tafaasiil dheeraad ah oo ku aaddan shilkii Ethiopian Airlines iyo sidii ay wax u dheceen oo faahfaahsan min bilow ilaa dhamaad.
Dayuuradda oo uu duullimaadkeeda tirsigiisu ahaa ET302 ayaa kacday subaxdii saacaddu markii ay ahayd 8:38 am, iyadoo ku wajahan Nairobi.
Waxay markiiba iska gashay xawaare joog ah oo aan la xakamayn karin, iyadoo iska soo dhintay 2,624 oo cagood/daqiiqaddii ilaa 1,216 oo cagood/daqiiqaddii.
Dayuuraddu waxay markiiba gaartey xawaare dhuleed gaaraya 441 mayl/saacadddii, iyadoo duulaysa joog dhan 8,600 oo cagood.
Waxay markaa la hadleen taraafikada garoonka Bole oo ay u sheegeen inay dayuuradda xakamayn la’yihiin, waxaana loo fasaxay inay dib ugu soo laabtaan garoonka.
Dayuuraddan oo sidii aan sheegnayba ah nooca cusub ee Boeing 737 MAX 8, ayaa xiriirkeedii oo dhami go’ay markii ay 8:44 daqiiqo xilliga maxalliga ah.
Dad beeraleey ah oo joogey meesha ay dayuuraddu ku dhacday ayaa sheegay inay dayuuraddu samaynaysay jabaq sirgaxan, iyadoo qaacaysa oo gadgadoomaysana ay mar qura dhulka kusoo dhacday, gaar ahaan Bishoftu oo 37 mayl dhanka dhulka u jirta Addis Abeba.
Weli lama oga waxa sababay shilkan, balse maadaama ay laba dayuuradood oo noocan MAX 8 ay dheceen muddo 5 bilood gudohood ah in yar uun kaddib markii ay duuleen, khubaro badan ayaa eedda u tirinaya hannaanka cusub ee Maneuvering Characteristics Augmentation System (MCAS.
MCAS oo ah agab otomaatic ah ayaa dayuuradda noocan ah oo uu matoorkeedu ka durugsan yahay halkii hore loogu xirey inuu dayuuradda miisaamo oo saaxi ka dhigo marka ay sare u socoto ee ay sanka taagto si looga hortago inay soo laaban waydo (stalling), taasoo keeni karta inay geddi cad ama garab garab dhulka ugu soo dhacdo. Halkan ka daawo dayuurad ay taasi qabsatay.
Qalabkan MCAS ayaa la sheegay inay dhici karto inay cilladi gashay, la jabsaday ama uu xog khalad ah dayuuradda siiyay, waase arrin weli la baarayo.
Previous articleHooyo uu wiil kale uga dhintay shil dayuuradeed oo Axaddii suuxday markii uu mid kale uga dhintay shilkii dhowaa
Next articleTusaale cajiib ah oo ku saabsan musuqa & madaxda Afrika + Sawirro